Synctuition နှင့်အတူ Alium NFT Marketplace ပူးပေါင်းမှု
Alium NFT အကြားနောက်ထပ်ပူးပေါင်းမှုကိုကြေငြာပါတယ်။ စျေးကွက်နှင့်ဥရောပ၏အကြီးမားဆုံးသောသတိပြုခြင်းအက်ပလီကေးရှင်း၊ Synct uition!
Covid-19 ကူးစက်ရောဂါသည်ကမ္ဘာကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ပုံ၊ သင်ယူမှု၊ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုနှင့်ကျန်းမာရေးကိုစဉ်းစားပုံတို့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်တွင်တည်းခိုကာ“ ပုံမှန်စံ” အသစ်သို့ပြောင်းကာကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ နှင့်အတူဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အထီးကျန်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့နှင့်အတူရုန်းကန် (သို့မဟုတ်ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရသည်) ။
ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားများအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခက်ခဲသောအခြေအနေများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအလယ်တွင်၊ Alium Art NFT Marketplace နှင့် Synctuition အကြားထူးခြားသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရန်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်ကမ္ဘာကြီးသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
MindSpa & Synctuition တရားအားထုတ်ရန်လျှောက်လွှာကို Play Store နှင့် Appstore တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ယခုအထိ download ပေါင်း ၅ သန်းကျော်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဆယ်နှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တော်လှန်ရေးဘာဝနာထုတ်ကုန်များဖြင့် Synctuition သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် CorporateLiveWire Innovation & Excellence Award ကိုရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကွန်ယက်ကုန်ပစ္စည်းလမ်းညွှန် Gold IT World A wards Holder ဖြစ်လာသည်။
Synctuition အက်ပလီကေးရှင်းသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်ခေတ်မီသောတရားအားထုတ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း။ ဒီနေ့မှာတော့ကျနော်တို့ကြေငြာချင်ပါတယ် - Alium NFT Marketplace မှတစ်ဆင့် Synctuition သည်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံး 3D soundscape ကိုစိတ်ကျန်းမာရေးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပေးတော့မှာပါ။ ထို့အပြင် Synctuition သည် NFT ကဲ့သို့ထူးခြားစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးသတိထားရမည့်အသံခရီးကိုပထမဆုံးပြုလုပ်သောတရားအားထုတ်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။! Synctuition ၏ထူးခြားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Alium NFT စျေးကွက်၏အကူအညီဖြင့် NFT ဈေးကွက်သို့လုံး ၀ အသစ်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်။
ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် Alium ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ Next Generation NFT နှင့်ကမ္ဘာကိုပိုမိုကောင်းမွန်လာရန် Synctuition ၏မစ်ရှင်က ဒီပူးပေါင်းမှုဟာ NFT Market and Development အတွက်ရှေ့သို့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမကြာမီဖော်ပြတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဤထူးခြားသည့်အဖြစ်အပျက်တွင်ပါ ၀ င်ရန်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်!
About Synctuition အကြောင်း
Synctuition ကိုအက်စတိုးနီးယားတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ ထူးခြားသောအပန်းဖြေအတွေ့အကြုံနည်းပညာ။ 3D အသံ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းအားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Synctuition သည်တွေးတောဆင်ခြင်စရာအပန်းဖြေမှုများကိုကျော်လွန်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားအသံဆိုင်ရာတွေးတောဆင်ခြင်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုရရှိသည်။
Alium Finance အကြောင်း
Alium Finance သည် CrossChain DeFi နှင့် NFT ၏ရည်မှန်းချက်ကြီးသည့်လမ်းပြမြေပုံပါတဲ့ MultiChain DeFi ဂေဟစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် Alium Swap MultiChain DEX နှင့် MultiChain NFT စျေးကွက် Alium Art တို့ပါ ၀ င်ပါသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် : https: / /alium.finance
တွစ်တာ : @ aliumswap
Alium Art အကြောင်း
Alium Art သည် multi- တစ်ခုဖြစ်သည်။ Channel NFT စျေးကွက်ကို Blockchains များလာရန်ပထမဆုံးအနေဖြင့် Binance Smart Chain တွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ NFT ဝါရင့်အဖွဲ့များမှထင်ရှားသော NFT အနုပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ တီထွင်ခဲ့သည် - Alium Art သည်အသုံးပြုသူများအတွက်လွယ်ကူသော interface နှင့်အနုပညာရှင်များနှင့်စုဆောင်းသူများအတွက်ကော်မရှင်အနိမ့်များကိုထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းသည်။
အထူးသီးသန့် blockchain သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူ privacy ကို Stellar ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ပြခန်းများ၊ collection များနှင့် repositories များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များစွာရှိသည်။ R ကိုသတင်းကြီးများကိုနားထောင်ပါ။